Nzuko Nzuko: Ngwa maka Nzuko Nzuko | Martech Zone
Ndị na-ere ahịa na-enwe nzukọ oge niile dịka ụlọ ọrụ… nzukọ bụ isi iyi nke echiche na atụmatụ. Ma nzukọ nwekwara ike ịbụ na-arụpụta ezigbo ihe. Ọ bụ ezie na ọtụtụ mmadụ na-achọ nzukọ mgbe niile, m na-ajụkarị. Nzukọ na-atụ ụtụ ma na-efu ego. Oge ụfọdụ ụjọ na-agbali nzukọ ebe ndị mmadụ chọrọ ikpuchi isi ha. Oge ndị ọzọ, nzukọ na-ewepụta ọtụtụ ọrụ ọ bụla n'agbanyeghị na ịmechabeghị.
Edere m na nso nso a na-ajụ, Anlọ Nzukọ Ezumike Ha Bụ Ihe Ga-egosi na Ọ Na-arụpụta Ihe? na afọ ole na ole gara aga ọbụna m kwuru na Nzukọ bụ Ọnwụ nke Nrụpụta America.
Adịghị m na-egwu egwu… M nnọọ kwụsịrị arụ ọrụ site na nnukwu ụlọ ọrụ ebe m n'ụzọ nkịtị nwere 30 + awa nzukọ kwa izu. Akwụsịrị m ịga nzukọ ọ bụla enweghị nzube, ihe kpatara m ji aga ebe ahụ, yana usoro ihe m na-eme. Nzukọ m gbadara otu awa ma ọ bụ abụọ n'izu ma arụpụta m karịa mgbe ọ bụla.
Ha na-ekwu na enwere ngwa maka ihe niile, ma ugbu a, anyị nwere ike ịnwe nke anyị ga-ezute na arụpụta ihe, Nzuko. NzuteHero dị mfe iji na ekwentị ọ bụla, mbadamba na kọmpụta ka ị wee weghara nkọwa dị mkpa n'oge ọ bụla.
NzuteHero Atụmatụ gụnyere
Weghara ma rụkọta ọrụ na Oge Na-adịghị Anya - Mfe imekota na ijide nzukọ dị oke egwu
nkọwa ka anuru onye obula ma onweghi ihe furu efu.
Nzukọ Dị Iche Iche, Ndị A Lekwasịrị Anya - NzukoHero na-eme ka ọ dịrị gị na ndị otu gị mfe ịmepụta, kekọrịta ma rapara na nzukọ agendas ka ị nwee ike lekwasị anya, mkparịta ụka na-arụpụta ihe, yana ụzọ ndị bara uru.
Mee Mkpebi Ndị Ọzọ - Site na ịnye ezigbo usoro nke nzukọ n’oge nzukọ gị, MeetingHero na-enyere gị aka iduzi ndị otu gị ka ịme mkpebi ma kwenye na usoro ndị ọzọ.
Nwee ihe omuma banyere nzuko nzuko a - Ọ bụla nzukọ nwere mfe iji nweta, shareable nzukọ nchịkọta, otú i nwere ike mafere na nzukọ na ka na-asian.
Ihe Nlekọta Nzukọ Gị niile - MeetingHero na-ahazi akwụkwọ nzukọ gị niile site na nzukọ gị niile ka ị wee nwee ike icheta ihe ị kwuru gbasara ya, mkpebi ndị ị mere na ihe a hapụrụ.
Kalinda njikota - Mmekọrịta MeetingHero na Kalịnda Google (ndị ọzọ na-abịa n'oge adịghị anya), yabụ ị nwere ike ịmepụta ma kpọọ ndị mmadụ ka ha bịa nzukọ otu ị na-eme oge niile, ma jiri MeetingHero hụ na nzukọ ndị ahụ na-arụpụta ọrụ ma na-arụ ọrụ.
Tags: atụmatụ mmemmengwakalendamwekota kalendammekotamkpebikalenda googlenzutenzukonzukọmobile ngwa
Jun 11, 2014 na 5:55 AM
Nzukọ ga-atụ ụjọ oge ụfọdụ, a na m aghọta gị, obi abụọ adịghị ya, mana enwere ike kpalie ihe nka na anyị niile n'otu oge,
M na-esi ọmụmụ ihe ụfọdụ enweta ume ọhụrụ. Enwetụbeghị m ngwa a mana achọpụtara m na ọ bụ ihe na-atọ ụtọ, ọkachasị masịrị m akụkụ nke post gị na njirimara, etinyere ya nke ọma. N'oge m na-eji ngwa akpọrọ nzukọ site na ụlọ ọrụ aha ya bụ Exquisitus, ọ nwere ihe ị na-echetụbeghị n'echiche, ọ masịrị m na mmekọrịta ya na ọtụtụ ngwa.
Jun 16, 2014 na 9:44 AM
Ọ ka bụ ngwa ọrụ ọhụụ mana ọ masịrị m ya nke ukwuu n'ihi na ọ dị mfe ma dịkwa mma. E nwere ụfọdụ isi na ị na-apụghị ime (ike ihichapụ “nzukọ” ndị na-dị nnọọ kalenda emek dị ka ọ akwusila kpamkpam si gị kalenda mmekọrịta) ma n'ozuzu ya a n'ezie ezi ngwá ọrụ.
Jun 16, 2014 na 3: 34 PM
Great nghọta Chris! Daalụ maka ịkekọrịta ozi ahụ. Echere m na ihe ọ bụla nke na-enyere aka ịhazi nzukọ obere ntakịrị bụ nzọụkwụ dị mma!